Waxay leedahay in la sameeyo Islam | Apg29
Sidaas xaq u ee falalka. Louisa iyo Maren ma ah kuwo gaar ah, ayaa dhawaan laga helay xabaalo wadareedyo ayaa leh 34 Masiixiyiinta gooyay Liibiya.
Waa maxay sababta aan u baahan tahay in badan oo ku saabsan diinta Islaamka bartaan? Interest waa yar yahay, laakiin sababaha jira dad badan oo ah sababta ay dadku u baahan guud si ay u horumariyaan aqoon.
Cabbirka sheer waa sabab ka mid ah, Islaamku waa Diinta labaad ee ugu weyn taariikhda ee ka dib markii diinta kiristaanka. Qiyaastii 1.6 billion oo qof, in ka badan shan meelood meel ka mid ah dadka dunida ku yihiin Muslimiinta, tiro ka mid ah in ay sii socoto in la kordhiyo, ma maxaa yeelay, dadkii isu doortaan in ay aaminsan yihiin in qorraxda nooc kasta oo fiidkii in il dhoobo ah (Quraanka 18:84), laakiin sababta oo ah Jaahil ah, hanjabaad dil loogu talagalay kuwa raba in uu ka tago, heerka dhalmada sare iyo socdaalka.
Tirada Muslimiinta ee Sweden iyo dalalka kale ee Yurub ayaa qarxay sannadihii la soo dhaafay iyo dad aad u badan nagu wareegsan wadaagaan asal ahaan isku mid ah, waxaa muhiim ah in la ogaado waxa ay matalaan.
Jaahiliyadii waxa Quraanka iyo Xadiiska wuxuu leeyahay waa ku weyn yahay xitaa Islam. Inta badan Muslimiinta waxay aaminsan yihiin in Islam uu xaq yahay oo kaliya la dafiri karin, ka dibna waxanuna waa waxa ay ayaa loo sheegay noloshooda oo dhan. Isla mar ahaantaana, iyagu ma ay baran su'aasha ilaha Muslim.
The Muslimiinta diinta Islaamka ayaa waxan sameeyey tan iyo kiisaska intooda badan lagu quudin jiray macluumaad been ah. Dadka diinta ka dib markii ay bartay Qorniinka waa mid aad u dhif ah.
"Waxaa ama nin aamin ah naag aamin, marka Eebe iyo Rasuulkiisa go'aan hal wax, u leedahay in doorasho xor ah ee arrintan ma ku habboon, oo kii caasiya Eebe iyo Rasuulkiisa, waxaa xabsi ku Sugan Baadi Cad." (Qur'an 33 : 36)
"The Rasuulka Eebe idinku aad haatan helay tusaale wanaagsan isaga, ruuxii rajayn Eebe iyo Maalinta Dambe, iyo si joogto ah Caabudayaan oo Eebe." (Quraanka 33:21)
Waayo, aqoon Christian waa tan ugu muhimsan marka Islam ay xumeeyaan waxyaabaha Kitaabka. Marka aan la wadaagno Injiil to our muwaadiniinta walaalahooda Muslimiinta ah, waxaan u baahan nahay in la ogaado sida ay khalad u tarjumid fariin aan u gudbiyo. Masiixiyiinta ku doodi tusaale ahaan in Ciise yahay Wiilka Ilaah. Waayo, Muslim ah, taas macnaheedu waa in Ilaah waa in ay la galmoon qof dumar ah oo wuxuu lahaa wiil, de markaas waa in dhab ahaan waxa Quraanka bara.
"Sidee hubaal lahaa cirka iyo dhulku ay carruur leedahay, ka dibna waxa uu leeyahay naagtiisa jirin?" (Quran 6: 101)
Isla sidaas waxa dhabta ah ee Saddexmidnimada. No Christian abid ee taariikhda labada aaminsan yahay ama uu sheegay in Trinity ka kooban lahaa Ilaah oo ah Ciise iyo Maryan. Cilmigaygu wuxuu u soo Tani waxaa ku margado by Quraanka in baro Muslimiinta in tani ay tahay waxa aan rumaysan.
"Xitaa marka Ilaah wuxuu yidhi, Ciise, ina Maryan, ma waxaad dadka ku odhan:" ani iyo Hooyaday Ilaahyo Eebe ka sokow qaad! (Quraanka 5: 116) ""
Nuxurka aad u iimaanka Christian waa Ciise dhimashadiisa, sarakicidda iyo ilaahnimadiisa. Islam ma aha oo kaliya oo beenisay in this oo dhan, laakiin waa caqiidooyinka, waxaan sida caadiga ah waxay leeyihiin si ay u difaacaan marka Muslimiinta waxaa loo tababaray in ay weeraraan kuwan.
"Oo wuxuu ku yidhi, Waxaan u Dillay Masiix Ciise Ibnu Maryam, Rasuulkii Ilaah, laakiin waxay innaba dilay midna ku qodbeen isaga, laakiin waxay noqdeen in sidaas oo keliya, iyo Kuwa ku doodaya ah oo ku saabsan, ayaa runtii ahayd mid aan la hubin, maxaa yeelay, iyagu ma ay lahayn cilmi u lahayn isaga, malo kaliya in ay u hoggaansamaan; wayna dileen nolosha dhabta ah, laakiin Ilaah sara kiciyey, waayo, Ilaah waa xoog badan yahay iyo kuwa xigmadda leh. (Quraanka 4: 156) "
Halkee Jaahil waa weyn
In dal oo ay Jaahil waa weyn, halkaasoo Islam badhaadho ugu fiican. Sweden waa tusaale wanaagsan oo ah tan. jaahilnimada guud ka dhigaysa warbaahinta, siyaasiyiinta iyo daaciyiinta Muslimiinta dhihi karaa wax kasta oo dadka aaminsan yihiin iyaga.
Tusaale ahaan waxa ay kala yihiin wakhtiyada aan tiro lahayn waxaan maqli qof imaam ka dib markii weerar kale oo dilaa ah argagixisada ee Magaca Eebe si ay u weeraraan waxba u qaban la Islam. Waxaan inta badan maqlaan in, tusaale ahaan, Muhammad ahaa dagaalka ee xaq u haweenka sida aynu Galbeedka ixtiraamaya xoriyadda haweenka. Kuwani waa been, laakiin dadka rumeeyaan Quraanka.
Laba nin oo dhallinyaro gooyay
Waxaan Louisa Vester tuuladiisa Jespersen iyo tusaale Maren Ueland, laba dumar ah oo dhallinyaro ah ayaa si waxashnimo ah gooyay kartaa fasax Morocco. Qof xaflad xusuus sheegay in dilalka ma leedahay in la sameeyo oo la Islam iyo gobolka SVT waa hillaac si degdeg ah u qabsado on in. Waxa uu leeyahay wax walba oo kaliya in ay sameeyaan la Islam.
Ogsoonow in dilka uu ahaa dadaal koox, kaas oo leh wax badan. Waxaan u sheegay saaxiibaday in aan laba dalxiisayaasha iman lahaa, si waxashnimo ah la gowraco xalaal iyaga, wax walba waa toogan iyo boostada on warbaahinta bulshada in ay samaysteen Hubi in aad kor ii xiran. Waa maxay xaq waraaqaha gacankudhiiglayaasha? Maxaa yeelay, Quraanka iyo axaadiista ah!
"Mushaarka ay, Ilaah iyo Rasuulkiisa la diriro, oo waxay sababaan fasaadinaysaan Dhulka, waa inaad kaliya in la Dilo ama la Wadho, ama aad qabto Caemahoodu, iyo Lugahoodu crosswise jareen, ama in loo Markase laga faydo argagaxa dalka. Tani waa inaad inay Mudanyihiin Dulli Nolosha adduunyo, iyo nolosha u yimaaddo ciqaabtiisa mudan cadaab darab. "(Quraanka 5:37)
Daacad u IS
Waa maxay leedahay laba dalxiisayaasha in la sameeyo dembiga caddayn ah "dagaal Eebe iyo Rasuulkiisa, iyo waxay sababaan hallayn dhulka"? Louisa iyo Marens dilaaga ku dhaartay inay daacad u IS. Norway iyo Denmark Labaduba waa qayb ka mid ah isbahaysiga caalamiga ah in gacan ka siyaabo kala duwan si ay ula dagaallanto WAA. Louisa iyo Maren maal dagaalka ka dhanka ah IS by bixinta canshuurta iyo sidaas eed ka mid ah dambiyada ku xusan.
Sida laga soo xigtay Muhammad qudhiisa si uu helo in taageero iyo qalabayn askari oo mushaar la mid ah sida ay isu askartii. Tani waa Jidka Eebe intii loogu talagalay.
"Kii aadamuhu dagaalyahan ah ee Jidka Eebe, heli doonaa abaal-marin ah sida, iyada oo aan in ay detracts ka abaal dagaalyahan ee yar." (Sunankiisa Ibn Majah 2758)
qabriga Mass 34 gooyay dadka Masiixiyiinta ah
Waxaan ognahay in Islam waa Ibliiska, in calaamadda Association wiilo ah. Ciise waa kaniisadda iyo kiniisadda yahay jirka iyo waxaa cad in Shaydaanku inuu kala saaro waxa u dhaxeeya.
In la eegaayo in soo laabashada Ciise, Stefan Eliasson